Tsy ampy ny orinasa miforona: mitotongana ny Ariary | NewsMada
Tsy ampy ny orinasa miforona: mitotongana ny Ariary
500 000 ! Ireo ny olona mitady asa isan-taona eto Madagasikara. Tsy araka izany anefa ny orinasa miforona, manome asa, fa manodidina ny 1 000 eo ho eo isan-taona. Vitsy koa ny mpandraharaha vahiny mampiasa vola (IDE) vaovao tonga eto amintsika ka tsy ampy ny vola vahiny (devizy) entiny. Manoloana izany, tsy mifandanja ary be ny elanelana eo amin’ny fanafarana entana avy any ivelany, ampiasana devizy, sy ny fanondranana entana any ivelany, mampiditra vola vahiny.
Miantraika any amin’ny sandam-bola Ariary ireo voatanisa ireo, ary hita fa tsy mitsaha-mitotongana ny lanjany miohatra amin’ny vola vahiny. Tato anatin’ny dimy taona farany, niakatra +23,49% ny sandan’ny Ariary mihoatra amin’ny vola vahiny. Mitombo +0,97% isan-kerinandro, ary +6,30% isan-taona. Nanomboka ny janoary 2019 teo, niakatra +3,55% ny sandany.
Nambaran’ny mpahay toekarena malagasy iray fa sarotra ny hanarenana io fihenan-danjan’ny Ariary io raha tsy misy fiovana toekarena mahery vaika eto amintsika. Mila miparitaka manerana ny faritra koa ny asa sy ny orinasa fa tsy tokony hivangongo aty Antananarivo, indrindra indrindra, mahatonga ny fifindra-monina avy any ambanivohitra mankany an-tanàn-dehibe. Lasa mitady asa aty an-tanàn-dehibe ny tanora satria tery ny tany sady sarotra ny asa fambolena, tsy ampy ny hoenti-manana, na tsy mahavelona intsony ny fambolena sy ny fiompiana.
Tranga iray mirongatra eto amintsika koa ireo mponina tratry ny kere sy ny haintany ary ny tsy fisian-drano any atsimon’ny Nosy ka mamonjy toerana ahitana izany, indrindra ny harena voajanahary, ireny mponina ireny. Lasa manapotika ny ala, ny faritra arovana, ny biby sy ny zavamaniry ary ny harena an-kibon’ny tany izy ireo. Tena ahitana izany any amin’ny faritr’Ambato Boeny, Ankarafantsika, Antsiranana, Toamasina, sns. Tsy manana vahaolana hamahana izany ny fanjakana hatramin’izao.